Mpisoloky MVola Roalahy no tratra tany Ambositra
Voasambotry ny polisy miasa ao Ambositra ireo 02 lahy ao anatin'ny tambazotran'ny mpisoloky amin'ny alalan'ny kaonty "MVola" sy "DAB-BFV".
Araka ny fitarainana voarain'ny polisy dia fantatra fa niantso ny nomeraon'ity mpitory ity ireto mpisoloky ireto izay milaza fa mpiasan’ny tambajotra «Telma» hanome fahana sy tombontsoa raha manaraka ny toromarika rehetra lazain'izy ireo. Efa fantatr'ireto jiolahy ireto avokoa ny mombamomba ity mpitory ity sy ny lela-vola misy ao anatin'ny kaontiny "Mvola". Nangataka ny "code temporaire" tamin'ity mpitory ity ireo jiolahy ireo ahafahan'izy ireo maka ny vola eny amin'ireny "DAB-BFV" ireny. Noho ny tsy fahafantaran'ity mpitory ity anefa dia nomeny ireto jiolahy ireto io "code temporaire" io ary lasan'izy ireo ny vola tao amin'ny kaontiny "Mvola". Nametraka fitoriana teny amin'ny biraon'ny pôlisy ity mpitory ity vao fantany fa voasoloky izy. Tsy niandry ela ny polisy fa avy hatrany dia nanokatra fanadihadiana. Nisy ny vela-pandrika nataon'ny pôlisy nahafahana nisambotra ireto mpisoloky ireto ka tra-tehaka ny 17 martsa teo izy ireo.